Ntuli aka Guinea: E jidere Onye isi ala, gọọmentị agbaze, mechie ókè
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Guinea » Ntuli aka Guinea: E jidere Onye isi ala, gọọmentị agbaze, mechie ókè
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa na Guinea • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Amaara na onye ndu ndị nnupụisi ahụ - Mamadi Dumbouya - jeburu ozi na Legion Ofesi France.
Ọchịchị ndị agha dara na Guinea.
Ndị nnupụisi ndị agha jidere onye isi ala Guinea.
Ndị isi ngagharị iwe mara ọkwa mmechi oke ala Guinea.
Colonel Mamadi Dumbouya, onye ya na ndị na -akwado ya mere ngagharị iwe na Guinea wee weghara ọchịchị, kpebiri ịgbasa ọchịchị, kagbuo iwu dị ugbu a ma mechie oke ikuku na ala.
Dumbouya dekọtara ozi vidiyo nke ọ na -ekwupụta atụmatụ ya mgbe ejidere ike n'ime Guinea.
Amabeghị ihe ga -eme onye isi ala Guinea Alpha Condé mgbe ihe onyonyo a na -enyochaghị gosipụtara ya n'aka ndị agha, ndị kwuru na ha ewerela ikike.
A hoputara Onye isi ala Condé maka arụmụka nke atọ na-eme n'ọchịchị n'etiti ngagharị iwe na afọ gara aga.